Kenya Airways Oo Bilaabaysa Duulimaadyo Ay Ku Timaado Somaliland – somalilandtoday.com
(SLT-Hargeysa)-Xidhiidhka xumaaday ee u dhexeeya Kenya iyo Somalia oo mar ahaan jiray kuwo jaal ka ahaa dhinaca xadka iyo duulimaadyada ka yimaada Muqdisho, ayaa Kenya Airways ay wakhti xaadirkan ay tixgalin siinaysaa sidii ay u bilaabi lahayd duulimaadyo ay ku tagto Hargeysi oo ay noqoto hadafkooda xiga ee Geeska Afrika.
Waxaanay arintani si xoog leh kor ugu qaadaysaa ganacsi dhexmara Kenya iyo Somaliland.
Kenya Airways ayaa markii hore dhamaystirtay xog ururin buuxda oo ay ka samaynaysay Hargeysa taas oo markii dambe uu Baarlamaanku okay-da ugu duugay inay duulimaadyo ku tagto Hargeysa balse tan ayaan wali dhicin.
Waxa lagu qiyaasaa ilaa 15,000 Muwaadiniin Kenyan ahi inay ka shaqeeyaan Somaliland oo si diiran loogu soo dhaweeyey gaar ahaana dhinaca waxbarashada.
AGaasimaha maamulka duulimaadka iyo Madaarada Cabdi Maxamed Rodol ayaa dhaan booqasho ku tagay Nairobi si uu wadahadalo ula yeesho Masuuliyiinta Kenya oo ku saabsanaa in Hargeysa ay ku haboon tahay in duulimaadyo ay ku tagto diyaarada Kenya Airways.
Ilaa iyo hada Diyaarada Ethiopia Airlines ayaa laba duulimaad ku tagta Somaliland oo iskaga kala gooshta Addis Ababa iyo Hargeysa.
Sidoo kale Fly Dubai ayaa duulimaado iyaduna iskaga kala gooshta magaalooyinka Dubai iyo Hargeisa taas oo keenta ganacsatada Somaliland ee ka imanaya dhamaan aduunka.
Qorshaha Qunsuliyada ay Hargeysa kaga furanayaan oo socda iyo Kenya Airways oo aragta in fursado duulimaad ay dalkan Somaliland ka jiraan.
Bishii la soo dhaafay Agaasimaha Wasaarada Arimaha Dibada Kenya Mr Philip Mundia Githiora ayaa loo asteeyey inuu caasimada Somaliland xafiis ka soo furo, horena waxa xafiisyo diblomaasiyadeed ugu lahaa dalalka Ethiopia iyo Djibouti.
Halkan hoose ka akhriso warkan